Miasa Hanova Ny Lalànan’ny Fitsapa-Kevi-Bahoaka ‘Tsy Ara-dRariny’ Ny Mpanohitra Ny Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Miasa Hanova Ny Lalànan'ny Fitsapa-Kevi-Bahoaka ‘Tsy Ara-dRariny’ Ny Mpanohitra Ny Nokleary
Voadika ny 05 Aogositra 2013 14:34 GMT
Nifamely totohondry ny mpanao lalàna tao amin'ny parlemantan'i Taiwan tamin'ny 2 Aogositra 2013 nialoha ny andatsaham-bato hanaovana fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny fananganana toby nokleary fahaefatra izay mampiady hevitra fatratra.
Ny toby, izay efa am-polony taona izao no nananganana azy ary efa nampisara-kevitra ny tao Taiwan, dia notsenain'ny fihetsiketseha-panoherana goavana noho ny fanahiana hisian'ny fanohintohinana ny fiainana andavanandro. Hotontosaina amin'ny 6 aogositra 2013 ny dingana manaraka iadian-kevitra momba ny fitsapa-kevi-bahoaka mampiady hevitra [zh] 2013. Miezaka ny mampihemotra hatrany ny fandatsaham-bato ny mpanao lalàna avy ao amin'ny Antokom-Pandrosoana Demokraty (DPP) raha te-handany ny fitsapa-kevi-bahoaka mialoha ny hahataperan'ny volana aogositra ny avy ao amin'ny antoko mitondra Kuomingtang.
Mampitodika ny sain'ny besinimaro ny resaka famelana ny olona hiditra amin'ny fanatontosana referandaoma sarotra ao Taiwan handatsa-bato amin'ny ho avin'ilay tobim-pamokarana nokleary. Manohitra ny referandaoma ny mpanao lalàna avy amin'ny DPP, milaza ny fomba fanao ho tsy ara-drariny.
Ny lalàna momba ny Referandaoma ao Taiwan, izay nolaniana [zh] tamin'ny Novambra 2003, dia mitaky ny 50 isan-jaton'ny mpifidy handray anjara amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka fa raha tsy izany dia hotsipahina izay volavola holaniana amin'ilay fitsapa-kevi-bahoaka. Tao anatin'ny folo taona dia enina ny referandaoma notontosaina fa tsy nisy lany ireo rehetra ireo.
Koa satria moa mitaky ny fandraisana anjaran'ny atsasaky ny mpifidy voasoratra anarana ho fetra farany ambany ny lalàna momba ny fitsapa-kevi-bahoaka, dia tsy hanankery ny referandaoma na dia hahazo ny marimaritra iraisan'ny mpifidy aza. Koa satria tokotokony ho 75 isan-jato ny tahan'ny fandraisana anjara fandrotsaham-bato any Taiwan, ny fihetsehan'ny 30 isan-jaton'ny mpifidy hanao ankivy ny referandaoma no ho ambonin'ny marimaritra iraisan'ny maro an'isan'ny mpifidy.
Mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fananganana tobim-pamokaraka nokleary fahaefatra sy ny referandaoma eo an-tokotanin'ny Fanaovan-dalàna Yuan. Saripika noraisin'i 陳逸婷, coolloud.org. tsy azo ampiasaina amin'ny resaka hahazoana vola (ara-barotra).
Ohatra, fitsapa-kevi-bahoaka roa[zh] tamin'ny 2004 na dia nahazo ny marimaritra iraisana aza ny 90 isan-jaton'ny mpifidy.
Ny voalohany moa miresaka raha toa ka tokony hividy fitaovam-piadiana enti-manohitra balafomanga i Taiwan raha mandà tsy hanaisotra ny balafomanga atodika ao Taiwan i Shina Tanibe. 45,17 isan-jato no nandeha nifidy ary 91,8 isan-jato no nanao eny.
Ny fitsapa-kevi-bahoaka faharoa indray manontany raha tokony hiditra fifampiraharahana amin'i Shina ny fitondrana Taiwaney amin'ny tolo-kevitry ny filoha Chen amin'ny alalan'ny karaza-piaraha-miasa “fandriampahalemana sy fitoniana”. 45,12 isanjaton'ny voasoratra anarana no nandeha nifidy ary 92,05 amin'izy ireo no nanao tsia.
Samy tsy lany izy roa ireo. Raha fehezina, sarotra ny mampandany referandaoma noho ny fahazoana fandresena amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Taiwan.
Miasa mafy ho amin'ny fanitsiana momba ny lalànan'ny fitsapa-kevi-bahoaka io amin'izao fotoana izao i Lin Yi-Hsiung, mpikambana ao amin'ny DPP sy mavitrika misolovava amin'ny fanoherana ny hery nokleary hatramin'ny 1989, mamelabelatra [zh] ny antony tsy ahitana taratra ny hevitry ny olom-pirenena amin'ny lalàna momba ny referandaoma ankehitriny:
Ny Kuomintang [antoko mahazo vahana ao amin'ny fanaovan-dalàna Yuan], izay zatra ny mandidididy, no nitady hanafoana ny fahefam-bahoaka amin'ny alalan'ny fametrahana lalàna henjana sy tsy misy antony ara-pisainana raha nandroso ny lalàna momba ny referandaoma ry zareo tamin'ny 2003. Tsy ho vitan'ny olom-pirenena velively ny hampiditra sy handany fitsapa-kevi-bahoaka raha arahina ilay lalàna. Tao anatin'ny folo taona farany, ny filoha sy ny antoko roa matanjaka ihany, ny Kuomingtang sy ny Antokom-Pandrosoana Demokraty, no afaka manolotra volavolan-dalàna hampanao referandaoma, ary tsy nisy lany hatramin'izay. Resy lahatra izahay fa io lalàna momba ny referandaoma io dia natao hialàna amin'ny referandaoma.
Miatrika fitsapa-kevi-bahoaka mifototra amin'ny lalàna momba ny fitsapa-kevi-bahoaka ankehitriny isika, lasa lalao politika lalaovin'ny mpanao politika izy ity na lasa kivazivazy manadala ny olom-pirenena. Izany no antony rehefa nolaniana ny lalàna momba ny fitsapa-kevi-bahoaka amin'izao fotoana izao, tsy niresaka momba ny fitsapa-kevi-bahoaka intsony ny fikambanana miaro ny fitsapa-kevi-bahoaka momba ny fananganana ny tobim-pamokarana angovo nokleary fahaefatra nidirako. Ny notakianay dia ny hanitsiana ny lalàna momba ny fitsapa-kevi-bahoaka. Raha tsy misy ny fanitsiana ny lalànan'ny fitsapa-kevi-bahoaka, tsy misy dikany ilay fitsapa-kevi-bahoaka.
Noho ny maha-avo loatra ny fetra ambany indrindra handaniana ny referandaoma, dia aleon'ny mpiaro ny hanaovana referandaoma, manao fanontaniana mifanohitra amin'ny hevitra ijoroany. Ohatra, noho ny fifandirana momba ny fananganana tobim-pamokarana nokleary fahaefatra dia naleon'ny governemanta sy ny antoko mitondra manao ny fanontaniana ho tahaka izao, “Tianao ve ny hampitsaharana ny fananganana ny tobim-pamokarana angovo nokleary fahaefatra?” Etsy ankilan'izany ny antoko mpanohitra te-hanao ny fanontaniana ho tahaka izao, “Tianao ve ny hanohizana ny fananganana ny tobim-pamokarana angovo nokleary fahaefatra?”.
Tsy tsara ho an'ny antoko mpanohitra ny teny nolalaovina tamin'ny fomba fanontaniana ao amin'ny referandaoma noho ny fananan'ny komity misahana ny fitsapa-kevi-bahoaka notendren'ny governemanta fahefana hitsipaka ny fitsapa-kevi-bahoaka mialoha ny idirana amin'ny fombafombam-pandrotsaham-bato. Ohatra, nisy volavolam-panaovana referandaoma tamin'ny 2009 miompana momba ny Fifanaraham-Piaraha-Miasa Ara-Toekarena Lasitra. Fanangona-tsonian'ny Taiwaney mihoatra ny 109.000 [zh] no nampiditra ny hanaovana ilay referandaoma saingy notsipahan'ny komity misahana ny referandaoma izany satria mifanohitra amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny mpampiditra ny hanatontosana azy ny fomba nanoratana ny fanontaniana. Rehefa nampakatra Fitsarana Tampony ireo mpamolavola ny referandaoma dia nandidy ity rafi-pitsarana tampony ity fa tsy mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny lalàna momba ny referandaoma tamin'ny 2012 ny fitsipahana nataon'ny komity misahana ny fitsapa-kevi-bahoaka.
Ny farany fa tsy ny kely indrindra, ao amin'ny lalàna momba ny fitsapa-kevi-bahoaka ankehitriny ity, rehefa tsy lany ilay referandaoma dia tsy azo atolotra intsony ao anatin'ny valo taona manaraka ny fandrotsaham-bato momba izany. Niahiahy [zh] fatratra momba ny fitsapa-kevi-bahoaka anontaniana momba ny tobim-pamokarana nokleary fahaefatra ny bilaogera Otto Hsu:
Momba ny politika lehibe tahaka ny Tobim-Pamokarana Hery Nokleary 4, raha vao nampidirina ilay izy, ka tsy ijerena izay ho valiny, dia tsy afa-mamolavola fitsapa-kevi-bahoaka mitovy amin'izany intsony isika ao anatin'ny valo taona.
Misy lafiny mahatsara izany famerana izany mba hitandroana ny fahamarinatoeran'ny politika raha mahazo ny vato ilaina [i.e., mihoatra ny atsasaky ny nisoratra anarana]. Saingy, raha vitsy fotsiny no tonga mandrotsa-bato […] , ny valiny dia ny vitsy anisa manakana ny Taiwaney rehetra handroso volavola hitsapana ny hevi-bahoaka momba an'io ihany.
Tsy mety izany. Mila manitsy ny lalàna isika hamahana ity olana ity! (Na tokony hampanao referandaoma hametrahana lalàna vaovao momba ny referandaoma!).